Anelanelany herinandro 4 sy 5 dia mitohy aingana ny fitombon'ny ary mizara ho ampahany 5 samihafa.
Ny loha dia mahafaoka 1/3-n'ny alehibe manontolo ny embryon .
Mipoitra ny hémisphère cérébral, izay ho lasa tsikelikely ny ampahany lehibe indrindra amin'ny atidoha.
Ao anatin'ny asa izay fehezin'ny hémisphère cérébral ny fisainana, ny fianarana, ny fitadidiana, ny fitenenana, ny fahitana, ny fandrenesana, ny fihetsehana atao an-tsitrapo ary ny fanalàna olana.
Ao amin'ny système respiratoire, ny tahona bronches ankavanana sy ankavia dia efa miseho ary tsy ho ela dia hampifandray ny trachée, sy ny avokavoka.
Jereo ilay aty mafy sy mavesatra izay mameno ny kibo mifanakaiky amin'ny fo izay mitempo.
Ny reins maharitra dia manomboka miforona amin'ny herinandro faha-5.
Ny chorion dia mitana ny cellules reproductives voalohany izay atao hoe cellules germes. Amin'ny herinandro faha-5 ireo cellules germes dia mifindra toerana ka mankany amin'ireo organes reproductifs izay mifanakaiky amin'ny reins.
Amin'ny herinandro 5 koa, no miforona ny plaque-n'ny tanana, ary manomboka amin'ny herinandro 5 1/2 ny fiforonan'ny cartilage
Eto dia hitantsika ny plaque-n'ny tanana ankavia ary ny hato-tanana amin'ny herinandro 5 sy 6 andro.
Amin'ny herinandro 6 dia mitombo ny hémisphères cérébraux fa aingana kokoa noho ny ampahany hafa ny atidoha ny fitomboany
Manomboka manao fihetsika tonga ho azy sy taitaitra ilay embryon. Ilay ireo fihetsika ireo mba hampandroso ny fitomboana neuromuscular ara-dalàna.
Raha kasihina ny eo akaiky ny vavany dia mihemotra ny lohan'ilay embryon- par réflexe izany.
Manomboka maka endrika koa ny sofina externe.
Amin'ny herinandro 6, Miforona ny cellule-ndrà ao amin'ny aty izay misy lymphocytes izao. Io karazana cellule-n-drà fotsy io dia manana anjara lehibe amin'ny fitomboan'ny système immunitaire
Ny diaphragme, izay ozatra lehibe ampiasaina rehefa miaina, dia efa miforona amin'ny herinandro 6.
Ampahan'ny intestin izao dia efa mivoaka tsindraindray ao anaty tadim-pôtra. Io fandehan-javatra io dia ara-dalàna ary atao hoe herniation physiologique, Ary manome lalana ho an'ireo organes hafa izay miforona ao anaty kibo.
Amin'ny herinandro 6 dia manomboka mihafisaka kelikely ny plaque-n'ny tanana.
Manomboka herinandro 6 sy 2 andro dia efa afaka mahita onjaavy amin'ny atidoha.
Ny mamelon dia manomboka mitranga manaraka ny halavan'ny vatana alohan'ny hatongavany eo amin'ny toerana izay hipetrahany farany eo alohan'ny tratra izany.
Amin'ny herinandro 6 ½ dia efa miavaka tsara ny coudes, manomboka misaraka ny rantsa-tanana ary efa hita mihetsika ny tanana.
Ny fiforanan'ny taolana, izay atao hoe ossification, dia manomboka amin'ny clavicule, BLANK ary ny taolana ambony sy ambany ny valanorano.
Manomboka herinandro 7 dia afaka hita ny hoquet.
Izao dia afaka mahita ny fihetsikin'ny ranjo izay mahatonga ilay foetus ho taitra tampoka.
Vita tanteraka ny fiforonan'ilay fo izay Manana efitra 4. Raha aravona dia in-167 isaky ny 1 minitra no mitempo ny fo izao.
Fihetsiketsehana elektrika avy amin'ny fo hita amin'ny herinandro 7 1/2 weeks dia mampiseho modelin'onja mitovy amin'ny olombelona matotra.
Eo amin'ny vehivavy, amin'ny herinandro faha-7 dia efa hita ny ovaires.
Amin'ny herinandro 7 1/2, ny rétine pigmentée ny maso dia mora hita ary ny hodi-maso dia manomboka mitombo aingana.
Ny rantsa-tanana dia misaraka ary ny rantsa-tongotra dia mikambana eo amin'ny fotony ihany.
Afaka mikambana izao ny tanana roa, ary koa ny tongotra roa.
Efa hita koa izao ny taolan'ny lohalika.
Amin'ny herinandro faha-8 efa mitombo fatratra Ny atidoha ary dia mikaoty ho atsasakin'ny lanja totalin'ny embryon eo ho eo ny lanjany.
Ny fitomboana dia mitohy aingana dia aingana.
Eo amin'ny herinandro 8 , amin'ny 75%-ny embryons rehetra dia hita fa ny ankavanana no manjaka. Ny sisa dia mizara mitovy na kavia na tsy mifidy. Io ny ahitana voalohany ny fihetsika avy eo amin'ny ankavia na ankavanana.
Ny boky pédiatrique dia miresaka momba ny fahaizana " mivadibadika " mitranga amin'ny herinandro 10 ka hatramin'ny 20 aorian'ny fiterahana. anefa io fahaizana mahagaga io dia efa miseho mialoha eo amin'ny tontolon'ny gravité avy eo amin'ny sac amniotique. Ilay hery ilaina tsy ampy ahazoana miady ilay hery manosika eo ivelan'ny utérus no mapahatonga ireo zaza vao teraka tsy hivadibadika.
Manomboka mihetsika betsaka ilay embryon amin'io fotoana io.
Mety miadana na haingana ny fihetsika, indray mandeha monja na miverimberina, tonga ho azy na vokatry ny reflex.
Ny fiodin'ny loha, ny fihetsikin'ny tenda, ary ny fihetsikin'ny tanana eny amin'ny tarehy dia miha-hita matetika.
Raha mikasika ilay embryon dia afaka mitondra azy hi-loucher, mampihetsika ny valanorano, fihetsika toy ny mamihina, ary manondro ny rantsa-tongotra.
Eo anelanelan'y herinandro 7 sy 8 , ny hodi-maso ambony sy ambany dia mitombo aingana eo amin'ny maso ary manomboka mitambatra tsikelikely.
Na dia tsy misy rivotra aza amin'ny utérus, dia hita hoe miaina ilay foetus amin'ny herinandro 8.
Amin'io fotoana io ny reins dia efa manome urine izay mivoaka any amin'ny fluide amniotique.
Eo amin'ny embryon lahy, ny testicules izay mitombo dia manomboka manome sy mamoaka testosterone.
Ny taolana, ny hozatra, ny ozatra, ary ny lalan-dra eo amin'ny tongotra na tanana dia miha-mitovy ny an'ny olona matotra.
Amin'ny herinandro 8 ny epiderme, na oditra ivelany , dia lasa membrane misy sosona maro, ary very ny ankebiazin'ny tsy fahitan-dokony.
Mitombo ny volomaso ary manomboka maniry ny volo manodidina ny vava.
Ny herinandro faha-valo dia mamarana ny fotoana embryonnique.
Nandritry io fotoana io ilay embryon dia nitombo avy amin'ny cellule singany iray koa lasa tsy latsaky ny cellules arivo tapitrisa izay manome mihoatra ny 4,000 structures anatomiques miavaka.
Ilay embryon izao dia manana mihoatra ny 90%-ny structures hita eo amin'ny olona matotra.